Como Regional Park Pathways Survey (Somali)
Guddiga Jaaliyadda ee Berta Como ayaa baadhaya sahan dadka isticmaala Berta Como. Waxaan dooneynaa inaan ogaano waxa ay u eg tahay si aad u hesho/tagto goobaha ama agagaarka Berta markad lugeneyso, baaskiilka wadid, ama siyaba kale haddii aadan ku jirin gaadhigaaga.
Ugu horreyn, waxaan ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan sida aad u isticmaashid Berta iyo goobaha kale ku kala yaala Berta Como. Waxaan isku dari doonaa jawaabahaaga iyo dadka kale si aan ugu tayagelinno horumar hagaajinta jidadka, calaamadaha, iyo helitaanka goobaha Berta.
Mashruucan wuxuu la shaqeynayaa Wasaaradda Beeraha iyo Madadaalada ee Saint Paul. Waxaa taageeraya qeyb ka mid ah deeqda iyadoo loo marayo Iskuduwaha Dib-u-hagaajinta Caafimaadka ee Gobolka Minnesota iyo Caafimaadka Bulshada ee Saint Paul-Ramsey.
Meeqa jeer ayaad booqataa Berta Como?
* 1. Meeqa jeer ayaad booqataa Berta Como?
Ugu yaraan toddobaadkii hal mar
Dhowr jeer bishii
Dhowr jeer sannadkii
Wax ka badneen hal mar sanadkii
Tani waa booqashadayda ugu horeysa
Booqashadii ugu dambeysey ee Berta Como Regional Park, sideebaad ku gaartay?
* 2. Booqashadii ugu dambeysey ee Berta Como Regional Park, sideebaad ku gaartay?
Baska (Como Shuttle)
Baska (Metro Shuttle)
Baska ama Van (iskuulka, ama gaadiidka dadweynaha oo kala duwan )
Baabuur ama gaariga kale oo gaar ah
Lug / socod
Siyaaba Kale (fadlan sheeg):
Iyada oo ku saleysan khibradaada, sidee u fududahay (ama aan u fududeen) goobaha berta Como Regional Park markaad socoto ama baaskiil wadid?
* 3. Iyada oo ku saleysan khibradaada, sidee u fududahay (ama aan u fududeen) goobaha berta Como Regional Park markaad socoto ama baaskiil wadid?
Marna kuma socdo lug ama baaskiilka goobaha Berta
Anigu waxaan lumay mar hore; hadda waxaan tagaa qaybo ka mid ah beerta aan si fiican u yaqaanno
Anigu waxaan lumay mar hore; laakiin hadda waan garanayaa qaybaha dhaman ee Berta, socdaal ama baaskiil wadid.
Waan aqaanaa goobaha dhamaan ee Berta markaan socoto ama baaskiil wado.
Anigu ma socdo ama baaskiil ku mawado qaybaha kale ee Berta, sababtoo ah ma aqaan sida loo tago.